UGersón Beltrán woHlelo lwe-5 lweTwingeo-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/UGersón Beltrán woHlelo lwesi-5 lweTwingeo
Geospatial - GISZobunjineli
Wenza ntoni ummi welizwe?
Kudala sifuna ukunxibelelana nomntu ophambili kolu dliwanondlebe. UGersón Beltrán uthethe noLaura García, oyinxalenye yeqela leGeofumadas kunye neTwingeo Magazine ukunika umbono wakhe malunga nexesha langoku nekamva le-geotechnologies. Siqala ngokumbuza ukuba yintoni kanye kanye ayenzayo iJografi kwaye ukuba - njengoko sihlala sinoxinzelelo - sinqunyelwe "ekwenzeni iimephu". UGerson wayigxininisa loo nto "Abo benza iimephu ngabaphengululi bamandulo okanye iinjineli zejometri, thina ziijografi siyazitolika, kuthi azisosiphelo, kodwa ziyindlela, lulwimi lwethu lonxibelelwano."
Kuye, "iJografi isebenza kwiindawo ezintlanu eziphambili: ucwangciso lwedolophu, uphuhliso lwendawo, ubuchwepheshe bolwazi lwendawo, indalo kunye noluntu olunolwazi. Ukusuka apho singatsho ukuba siyinzululwazi apho kwaye, ke ngoko, sisebenza kuyo yonke loo miba apho umntu enxulumene nendalo esingqongileyo kwaye enendawo ebalaseleyo yendawo. Sinako ukubona iiprojekthi ngokombono wehlabathi ukudibanisa uvakalelo lwezinye iinkalo ukuze sihlalutye, silawule kwaye siguqule ummandla ”.
Mva nje siyabona ukuba i-geotechnologies inikwe ukubaluleka okukhulu kwaye ke, iingcali kweli candelo ziyafuneka ukuze zikwazi ukuthobela iinkqubo zolawulo lwedatha ngokuchanekileyo. Umbuzo ngowokuba ubaluleke ngantoni ubuchwephesha obunxulumene ne-geotechnologies, apho undwendwe luye lwaphendula lathi “Icandelo lezamashishini e-geospatial onke amacandelo ezenzululwazi ezijikeleze umhlaba. Namhlanje zonke iinkampani zisebenzisa umahluko wendawo, kuphela ezinye ezingazi. Bonke banobuncwane obunedatha ye-geolocated, kufuneka uyazi nje ukuba uyikhuphe njani, uyiphathe kwaye ufumane ixabiso kuyo. Ixesha elizayo liza kuqhubeka liba nendawo ngakumbi nangakumbi kuba yonke into yenzeka kwenye indawo kwaye kubalulekile ukwazisa oku kuguqukayo ukuze ube nombono opheleleyo wayo nayiphi na intsimi ”.
Malunga neGIS + BIM
Uninzi uninzi lucacile ukuba olu hlaziyo lweshishini le-4 njengenye yeenjongo zalo kukudala izixeko ezifanelekileyo. Ingxaki iza xa kukho umahluko wengcinga ngokubhekisele kwizixhobo zolawulo lwedatha, kwi-BIM enye ilungile, kwabanye i-GIS kufuneka ibaluleke kakhulu. UGerson ucacisa ukuma kwakhe kulo mbandela “Ukuba kukho isixhobo esivumela ulawulo lwezixeko ezifanelekileyo, ngaphandle kwamathandabuzo, yi-GIS. Umbono wokwahlula isixeko ube ngamanqanaba ahambelana kunye nenani elikhulu lolwazi sisiseko se-GIS kunye nolawulo lomhlaba, ubuncinci ukusukela nge-XNUMXs. Kum, i-BIM yi-GIS yabayili bezakhiwo, iluncedo kakhulu, inefilosofi efanayo, kodwa kwinqanaba elithile. Iyafana kakhulu naleyo yayiyinto yokusebenza neArcgis okanye iAutocad.
Ke, ukudityaniswa kwe-GIS + BIM yeyona nto ifanelekileyo, -umbuzo wesigidi seedola, abanye banokuthi- "Ekugqibeleni, eyona nto ikulungeleyo ukuyidibanisa, kuba isakhiwo ngaphandle komxholo asinantsingiselo kwaye nendawo engenazakhiwo (kwi ubuncinci esixekweni) ngokunjalo. Kufana nokudibanisa iGoogle Street View ezitalatweni kunye neGoogle 360 ​​ngaphakathi kwezakhiwo, akufuneki kubekho ikhefu, kufuneka iqhubeke, Ngokufanelekileyo, imephu ingasithatha ukusuka kuMilky Way ukuya kwi-Wi- I-Fi kwigumbi lokuhlala nayo yonke into iya kudityaniswa ngamanqanaba smart. Ngokubhekisele kumawele edijithali, banakho okanye bangabikho ngaphakathi kwesi sibonelelo, ekugqibeleni yindlela eyahlukileyo yokusebenza kwaye, njengoko benditshilo, lo ngumcimbi wokulinganisa ”.
Kukho izixhobo ezininzi ze-GIS zombini ezizimeleyo nezasimahla ukuzisebenzisa, nganye inezibonelelo ezahlukileyo, kwaye impumelelo yazo ixhomekeke nakwindlela umhlalutyi ayingcali ngayo. Nangona uBeltrán esixelele ukuba akasebenzisi isoftware ye-GIS yasimahla, uvakalise uluvo lwakhe “ngoogxa bakhe kwaye efunda kakhulu, kubonakala ngathi i-QGIS inyanzelisiwe, nangona i-GVSIG ihlala kwiLatin America njengeGIS ngokugqwesa. Kodwa zininzi iindlela ezinomdla ezinje ngeGeoWE okanye iMapic eSpain. Abaphuhlisi abangabikho kangako kwihlabathi le-geo basebenza kunye neLeaflet kunye nabanye ngokuthe ngqo ngekhowudi. Ukusuka kwimbono yam izibonelelo zihlala zixhomekeka kwiinjongo, ndenze uhlalutyo, ukubonwa kunye nokunikezelwa nge-GIS yasimahla kwaye, ngokuxhomekeke kwinjongo, ndisebenzisa enye okanye enye. Kuyinyani ukuba inezibonelelo ngaphezulu kwe-GIS yobunini, kodwa ikwanazo nezinto ezingalunganga, kuba ifuna ulwazi kunye nexesha lenkqubo kwaye, ekugqibeleni, ejika ibe yimali. Ekugqibeleni zizixhobo kwaye into ebalulekileyo kukwazi ukuba ufuna ukusebenzisa ntoni kunye negophe lokufunda eliyimfuneko ukuyenza. Awunyanzelekanga ukuba ume kwicala elinye okanye kwelinye, kodwa endaweni yoko vumela bobabini ukuba bahlale kunye kwaye bakhethe esona sixhobo silungileyo kwiprojekthi nganye, eya kuthi ekugqibeleni inike esona sisombululo sisiso kwingxaki nganye ”.
Ukuvela kwezixhobo ze-GIS kuye kwabanzima kule minyaka idlulileyo, apho uBeltrán wongeze khona iimpawu "Ukucebisa kwaye kuyamangalisa." Ewe, ukudityaniswa kobunye ubuchwephesha kuko oku kubakhokeleyo kwezinye iindawo, ukuba bashiye "indawo yabo yokuthuthuzela" kwaye bongeze ixabiso kwezinye iindlela, baye batyetyiswa ngenxa yolu hlaziyo, eyona nguqulelo ilungileyo ihlala ingumxube kwaye ayicaluli kwaye oku kuyasebenza nakwitekhnoloji ye-geospatial.
Ngokubhekisele kwi-GIS yasimahla, i-neogeography eyaqala kwiminyaka emininzi eyadlulayo ifikelele kwinqanaba eliphezulu apho nabani na anokukwazi ukwenza imephu okanye uhlalutyo lomhlaba ngokusekwe kwiimfuno zabo nakwizakhono kwaye yinto entle leyo, kuba ivumela ukuba nobubanzi obubanzi iimephu ngokuxhomekeke kwiimfuno kunye namandla eziko ngalinye.
Ekubanjiweni nasekubekweni kwedatha
Siyaqhubeka nemibuzo, kwaye kweli candelo yayikukujika kokufunyanwa kwedatha kunye neendlela zokubamba, njengoko kuya kuba yikamva lomoya kunye neenjineli zesithuba, ngaba ziya kuyeka ukusetyenziswa kwaye ziya kusetyenziswa izixhobo zokubamba ixesha lokwenyani ? UGersón usixelele “ukuba zizakuqhubeka zisetyenziswa. Ndingumlandeli omkhulu weemephu zexesha lokwenyani, kodwa oko akuthethi ukuba baya "kubulala" ukuveliswa kolwazi olungabalulekanga, nangona kuyinyani ukuba uluntu ludla ngokutya ulwazi, kukho olufuna loo maxesha kwaye elinye ikhefu. Imephu ye-hashtag ye-Twitter ayifani nemephu ye-aquifer, kwaye ayifanelanga ukuba njalo, zombini zinolungelelwaniso kunye nolwazi lwendawo, kodwa zihamba ngolungelelwaniso lokwahluka okwexeshana ”.
Ngokukwanjalo, siyakucela ukuba ubonakale malunga nenani elikhulu lolwazi oludluliswa rhoqo zizixhobo eziphathwayo, ngaba likrele elintlangothi-mbini? "Ngokwendalo zilikrele elintlangothi-mbini, njengazo zonke izixhobo. Idatha inomdla kakhulu kwaye ndiqinisekile ukuba bayasinceda, kodwa bahlala phantsi kwemigaqo emibini: imigaqo yokuziphatha kunye nomthetho. Ukuba zombini ziyafezekiswa, izibonelelo zibaluleke kakhulu, kuba unyango olwaneleyo lwedatha, olungachazwanga kunye noludibeneyo, lusinceda ukuba sazi ukuba kwenzeka ntoni kwaye kwenzeka phi, sivelise iimodeli, sichonge imeko kwaye, kunye noku, ukwenza ukulinganisa kunye noqikelelo lwendlela inokuvela ”.
Ke Ngaba ubuchwephesha obunxulumene neGeomatics kunye noLawulo lweDatha eNkulu buya kuphinda buhlaziywe kwixa elizayo? Ndiqinisekile ukuba ewe, kodwa hayi kangako ukuba kukho uvavanyo olucacileyo, ekunokwenzeka ukuba yile nto ilindelwe ngabo bonke oochwephesha, kodwa ngokungathandabuzekiyo, inyani yokusebenzisa izixhobo kunye nokusebenza kweGeomatics kunye neDatha eNkulu esele ichaza ukuba Ukuhlaziywa kwakhona okufanayo. Njengomlingani, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba kukho iqamza elithile, umzekelo, malunga neDatha eNkulu, ngokungathi sisisombululo sayo yonke into kwaye ayisiyiyo, inani elikhulu ledatha ngokwazo alinaxabiso kwaye iinkampani ezimbalwa Ukuguqula loo datha ibe lulwazi kunye nobukrelekrele obunceda ukuba benze izigqibo kunye nokuphucula ukusebenza kweshishini.
Yintoni amava okuDlala nokuya?
Usixelele ngeprojekthi yakhe, Dlala & uhambe namava, "Ukudlala kunye nokuya kumava sisiqalo saseSpain esinceda imibutho kwiinkqubo zenguqu yedijithali ngezisombululo zetekhnoloji. Sisebenza kuwo onke amacandelo, nangona sikhethekile kwiinkonzo (ezokhenketho, ezokusingqongileyo, ezemfundo, ezempilo, njl. Kumdlalo wokudlala kunye nokuhamba siqhuba uyilo, inkqubo, ukuxhaphaza kunye nohlalutyo lweziphumo zeprojekthi ukuphucula amava omsebenzisi ngokwenza umdlalo kunye nokuphucula iziphumo zemibutho ngedatha efanelekileyo.
Ukongeza la mava, uGersón wathumela umyalezo okhuthazayo kubo bonke abo bafuna ukunika iJografi ithuba njengoqeqesho kunye nendlela yokuphila. “IJografi, njengenzululwazi, isinceda siphendule imibuzo, kule meko inxulumene nomhlaba osingqongileyo: kutheni kukho izikhukula nendlela yokuziphepha? Usakha njani isixeko? Ndingatsala abakhenkethi abaninzi kwindawo endiya kuyo? Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokufumana ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ukungcolisa kancinane? Imozulu inefuthe lini kwizityalo kwaye itekhnoloji inokwenza ntoni ukuphucula? Zeziphi iindawo ezinamazinga aphezulu okuqesheka? Zakhiwa njani iintaba? Kwaye ke imibuzo engapheliyo. Into enomdla malunga nolu qeqesho kukuba lubanzi kwaye luvumela umbono wehlabathi kunye nokunxulumana nobomi babantu kwiplanethi, engaqondakaliyo ukuba ihlalutyiwe kuphela kwimbono enye. Ekugqibeleni sonke sihlala endaweni kwaye kwimeko yendawo kunye neyethutyana kunye nejografi isinceda ukuba siqonde ukuba senza ntoni apha kunye nendlela yokuphucula ubomi bethu kunye nabantu abasingqongileyo. Kungenxa yoko le nto ingumsebenzi osebenzayo, njengoko sibonile ngaphambili, loo mibuzo, enokubonakala ngathi iyintanda-bulumko, yehla iye kwindawo yenyani kwaye isombulule iingxaki zabantu zokwenyani. Ukuba yijografi kukuvumela ukuba ujonge ngeenxa zonke kuwe kwaye uqonde izinto, nangona ingezizo zonke okanye, ubuncinci, uyazibuza ukuba kutheni zisenzeka kwaye zizama ukuphendula, emva kwayo yonke loo nto sisiseko sesayensi kwaye yintoni esenza ukuba sibe ngabantu "
Umhlaba mkhulu kakhulu kwaye uyamangalisa ukuba ungazami ukuwuqonda kwaye uzidibanise nawo, kuya kufuneka uphulaphule ngakumbi indalo kwaye ulandele isingqisho sayo ukuze yonke into ilungelelaniswe kwaye ihambelane. Okokugqibela, ukuba bahlala bejonga ngaphambili ukuyazi, kodwa, ngaphezulu kwako konke, kwikamva ukuphupha ngayo kwaye ikamva lihlala liyindawo esifuna ukufikelela kuyo.
Udliwanondlebe olupheleleyo lupapashwe kwi Ushicilelo lwesihlanu lweMagazini iTwingeo. I-Twingeo isesandleni sakho ukuze ufumane amanqaku anxulumene ne-Geoengineering kuhlelo lwayo olulandelayo, nxibelelana nathi nge-imeyile editor@geofumadas.com kunye editor@geoingenieria.com. Kude kube luhlobo olulandelayo.